Gịnị bụ usoro ndị enwere ike ịme n'ụlọ iji buso coronavirus ọgụ? | RayHaber | raillynews
HomeGeneralGịnị bụ usoro ndị enwere ike ịme n'ụlọ iji buso coronavirus ọgụ?
20 / 04 / 2020 General, coronavirus, Isi akụkọ, OGBU NIILE, Turkey
Kedu ihe ndị a ga - eme n'ụlọ iji lụso coronavirus ọgụ
Usoro dị mfe a ga-etinye n'ụlọ, ọkachasị ịdị ọcha, na ọgụ a na - alụso coronavirus nwere ike ịbụ nnukwu nnukwu mkpa iji kpochapụ ihe ndị gbasara ibute ọrịa. Sabri Ülker Foundation bu n’obi ime ka ọha na eze mara banyere ihe a site na ozi dị mkpa ọ na-achịkọta nke sitere na ụlọ ọrụ akwụkwọ mba ụwa.
Ọ bụ ezie na coronavirus (COVID-19) na-akpata nchegbu n'ihi ọsọ nke mbufe, ụjọ maka ibute ọrịa ahụ na-abawanye, ọkachasị ndị bu ọrịa n'ụlọ. Dabere na ozi Sabri Ülker Foundation chịkọtara, enwere ike belata ihe ize ndụ nke ibunye ndị ọzọ ọrịa site na usoro ụfọdụ enwere ike ịme n'ụlọ. Na mgbakwunye na ịnọpụ iche n'ụlọ, enwere ike iwepụta usoro ịme ihe megide COVID-19 na igbochi ọrịa ahụ site na mgbochi mgbochi.
Ndị ha na ezi na ụlọ ha kwesịrị ịnọpụ iche mgbe nke inwe obi abụọ
Gbalịsie ike na naanị otu onye na-emeso onye òtù ezinụlọ ahụ na-arịa ọrịa. Gbalịsie ike na onye ị họpụtara enweghị ọrịa ọ bụla na-adịghị ala ala, ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
Lezienụ anya na iji ebe a na-ahụkarị, ejikwala ihe ndị a na-ahụkarị, ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, ma hụ na onye ọrịa anaghị eji otu ụlọ mposi ahụ dị ka ndị ezinụlọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ekekọrịta, gbanye ọgwụ mgbe ejirichara ya.
Debe onye ọrịa n'ime ụlọ ebe ị nwere ike ịmị ikuku nke ọma ma nọrọ naanị ya.
Na-eme ka ikuku gị na-anọkarị mgbe niile. Ukpuru nwere mmachi a na-akpọbidokarị ụzọ dịka aka ụzọ na ọkụ ọkụ.
Na-elekọta ọcha. Sachaa aka mgbe niile, ọkachasị mgbe gị na onye ọrịa richara, ma ọ bụ mgbe gị na onye ọrịa ahụ metụtara ihe ọ bụla, tupu ịkwadebe nri, tupu i rie nri, mgbe ị gachara mposi.
Jiri ihe nkpuchi na uwe mgbe ị na-ehicha ụlọ nke onye ọrịa.
Sichaa akwa akwa nke onye ọrịa dịka akwa akwa, akwa nhicha akwa, akwa uwe akwa yana akwa nhicha ahụ mgbe ọ bụla na 60-90 Celsius.
Debe akpa mkpofu maka ihe mkpuchi ihu na ihe mkpofu ndị ọzọ n'ime ụlọ onye ọrịa.
Anabatakwa ndị ọbịa ọ bụla n’ụlọ ruo mgbe onye ọrịa ahụ gbakere.
Mee onye ọrịa ahụ ka ọ bụrụ ihe mkpuchi ahụike mgbe niile belata ohere ọ ga-enyefe ndị ezinaụlọ ndị ọzọ nọ n'ụlọ. Gbaa mbọ hụ na agbanwee nkpuchi a na-eji gbanwere ọ dịkarịa ala otu ugboro n’ụbọchị. Ekwesịrị ịhapụ ụlọ ndị nwere nsogbu ikpuchi nkpuchi ugboro ugboro, kpachara anya karị mgbe ụkwara ma ọ bụ mgbe ha na-amị amị, a ga-enye ha ya iji mee ka aka ha dị ọcha ugboro ugboro.
Atụmatụ na ime ihe mgbochi na - eme ka ọ dịrị gị mfe imeri usoro a
Na mgbakwunye na ịnọpụ iche n'ụlọ, ịnwere ike imepụta usoro ime ihe megide COVID-19 ma belata ihe ize ndụ nke ịrịa ọrịa site na mgbochi mgbochi.
Ọ bụrụ na i bi naanị gị, jiri ekwentị ma ọ bụ e-mail wee kpọtụrụ ndị ezinụlọ gị na ndị enyi gị ma depụta ekwentị ndị ị nwere ike ị nweta ma ọ ga-ekwe omume.
Zere iso ndị na-arịa ọrịa na-akpakọrịta.
Agala mgbe ị na-arịa ọrịa, belụsọ maka enyemaka ahụike.
Jiri ikpere aka ma ọ bụ nweta akwa nhicha ahụ mgbe ị na -a ụkwara ma sọọsụ, wee saa aka gị.
Ghichaa akwa a na-ahụkarị mgbe ọ dị ka oche, aka ụzọ na tebụl kwa ụbọchị.
Jiri ncha na mmiri sachaa aka gị ugboro ugboro.
Mgbe aka gị ruru unyi, lezie anya iji saa ncha na mmiri saa ha.
Ejila aka gị metụ ihu gị n’achapụghị aka gị.
Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma, kewapụ onwe gị na ndị ezinaụlọ gị, ahapụkwala ime ụlọ gị.
Y’oburu na aru adighi gi nma, were nkpuchi kpuchie ndi ezinulo gi n’ụlọ.
Ọ bụrụ na ahụ adịghị gị mma, esokwala ezinụlọ gị nwe ụlọ gị.
Kedu ihe echefuru na ụgbọ okporo ígwè Ankara
Baku Tbilisi ga - enwe ike ịkwaga ụgbọ mmiri si China na Europe site na ụgbọ okporo ígwè Kars
Drones bụ estzọ kachasị mma iji nyefee ihe ndị dị na Ahụike na Mkpokọta Covid-19
Mba ndị otu G20 kesara ahụmịhe ha na Ijikọ Kovid-19
Nkwado ego bụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ahụ ike na mbuso agha COVID-19!
Ọdụ Airportgbọelu Istanbul nke atọ na-aga n'ihu na Oke Ọsọ
Derevenk Viaduct na-ejikọ Hulusi Akar Boulevard
Kedu Iwu Ọhụụ Na-azụ Zụrụ Ụgbọ Ụgbọ Mmiri Abụọ Gịnị Ka E Kwụnyere na Sekọndrị Ọkachamara?
Ụbọchị Ikpeazụ maka Ngwa Ngwaahịa TCDD! Kedu ihe bụ Okwu ahụ?